You are here: Home somal Milicsiga Ciyaartoydii Kooxdii NPP Oo Ka Mid Ahaa Kooxihii Abid Ugu Wanaagsanaa Ee Soo Maray Dalkee
Haddaba hoosta ka daalaco laacib kasta iyo halka uu maanta dunida kaga nool yahay
waxaan toddobaadkana mar kale aanu dib idiin xasuusin doonaa ciyaartoydii waayo soo maray dalkeena, gaar ahaan Caasimada Hargeysa kuwaas oo Garoomada waaweyn ee Kubada Cagta wacdaro lama ilaawaan ah ka dhigi jiray. Waa muhiim in taariikhda dib loo raaco oo la xuso ciyaartoydii qaaliga ahaa ee dalkeena soo maray ee wakhtiyada qaar lagu majeeran jiray, loona riyaaqi jiray hanaankoodii iyo qaab ciyaareedkoodii wacnaa.
Waxaynu milicsan doonaa ciyaartoydii kooxdii NPP ee Sagaashameedyadii ka dhisnayd Caasimada Hargeysa, kooxdaas oo ahayd mid ka mid ah kooxihii abid ugu wanaagsanaa ee dalkeena soo maray gaar ahaan Caasimada Hargeysa hadaabay ahaynba tii ugu fiicnayd. Sawirkan idiin muuqdaa waa intii ugu badnayd ciyaartoydii wakhtigaas ee NPP walaw ay ka maqan yihiin ciyaartooyo fara ku tiris ah, waxaa laga yaaba intiina qaar xasuusataa inayba shalay idinla ahayd, laakiin sawirkan waxaa laga qaaday sannadkii 1998-kii. ka soo gudub, sawirka idiin muuqdaa waa 14-ciyaartoy oo ka mid ahaa ciyaartoydii lagu dhaadan jiray ee wakhtiyada qaar ee NPP. Hadaan war-bixin yar oo kooban sii raacino Waxaa wakhtigaas kooxda hogaaminayay oo tababare u ahaa Cabdirisaaq Axmed Ismaaciil oo sannadihii ugu dambeeyayna hogaaminayay kooxda heerka koowaad ee Goodir.
Haddaba Akhristayaal inkasta oo sawirkan ay ka maqan yihiin dhawr ciyaartoy oo uu ka mid yahay Khadaaro, Yaasiin Cali Xaashi, iyo Cismaaan Laba Qori ayaa hadana ah kuwo wakhtigu kala fogeeyay, inkastoo inta baddan ay hada dalka ku sugan yihiin halka kuwo kalena ay qaaradaha dunida ay yagleeleen. Sawirkan kooxdii NPP aya ahaa koob la odhan jiray Hargeysa Cup kaas oo ka socday Garoonka Hargeysa Stadium, waxaana wakhtigaas qabtay koobkaas oo maal-galiyay Haldoor Xasan (Waraabe-cade), waana kulankaasii oo ahaa Finalkii ay Rikoodhayaal kaga guuleysteen kooxdii NDC. Haddaba hoosta ka daalaco laacib kasta iyo halka uu maanta dunida kaga nool yahay
Muuse (Qudhaanjo): Waxa uu ahaa ciyaartoy khabiir ahaa oo xulka Qaranka Jabouti u saftay markaasna ku jiray, haddana isagoo u kala dab qaadi jiray inuu ka kala ciyaaro garoomada labadaas wadan, kooxda NPP-na wuu ka mid ahaa wuxuu ka ciyaari jiray Difaac numberka 4 isagoo sidoo kalena buuxin karayay dhex dambe Numberka 6-aad. Laacibkan ayaa wakhti xaadirkan ku nool Magaalada Jabouti.
Axmed Saleebaan (Isbiirto): Difaacii baasha Midig ee lama dhaafaanka ahaa, waxa uu hada ku nool yahay Magaalada Hargeysa isagoo ka shaqaysta.
Cumar Saalax: Mishiinkii khadka dhexe ee taataabashada, kubad abuurihii ku xaragoon jiray garoonka dhexdiisa ayaa hada ku sugan Magaalada Hargeysa, waxaana uu ka mid yahay Masuuliyiinta Shirkada Som Cable,.
Axmed Yaasiin: Laacibkii orodka baddnaa nasiibkana ku lahaa gool dhalinta ayaa ku sugan Qaarada Yurub, gaar ahaan wadanka Sweden.
Siciid Qarayare: Laacib iga dheh, mar la aragii, mucjisadii gaabnayd, laacibkan ayaa khada dhexe kooxda NPP uga habayn jiray kubada, waxaana isla sannadkaas dhamaadkiisii soo dalbatay koox heerka koowaad oo ka dhisan wadanka Qatar, walaw aanu ku biirin kooxdaa, waxa uuna hada wakhtigiisa ku qaadanaya Magaalada Hargeysa.
Maxamed Xato: Difaacii Baasha bidix iyo Midigba qaban jiray ayaa isna ka mid ah halyeeyada hada ku sugan dalkeena gaar ahaan Magaalada Hargeysa.
Amiin Cabdilaahi Xaashi: Shabeelkii Goolhayenimada looga fadhiistay, sidoo kalena ahaa xiddig kubada kolayga aan la hor istaagi jirin, ayaan la hilmaami karayn guulihii kooxda NPP oo uu dhamaantood ku suntanaa. Amiin ayaa ku sugan Magaalada Hargeysa.
Deeq Dhiida: Laacibkii baalaha weerarka kuu doono ka soo gali jiray, ayaa ku sugan wadanka USA.
Nimcaan Sandheere: Difaacii Rastada ku caanka ahaa ee kooxdii NPP Nimcaan ayaa isna saaxiibadii kula nool Magaalada Hargeysa, inkastoo oo uu dhawaan dalka dib ugu soo noqday isagoo muddo dheer waxbarasho dibada ka soo dhamaystay. Waxaana uu hada ka mid yahay Maamulka Jaamada Gollis University.
Amiin Qaro: Weerar yahankii ma daalaha ahaa Qaro ayaa isna ka mid ah ciyaartoyda ku nool qaarada Yurub gaar ahaan wadanka England
Diito: Weerar yahankii gool ma-gafaha ahaa inta baddana dhalin jiray goolashii NPP, Diito waxaa lagu xasuustaa goolashii quruxda baddnaa ee uu dhalin jiray, waxa uu weli yahay halyey aan ka dhex bixin kubada cagta jaceyl uu u qabo weli, waana maamulka sare ee kooxda Goodir, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa.
Siciid Bidaar: Difaacii kooxda NPP ka ilaalin jiray in goolkooda wax laga dhaliyo, laacibkii talaabsan jiray ee Madaxiisu la saaxiibay kubada Siciid Bidaar ayaa ku nool qaarada Yurub gaar ahaan wadanka Sweden.
Khadar Shafay: Kubad dilihii darbada weynaa ee NPP ayaa ka mid qurba joogta kooxdiisi hore waxaana uu ku nool yahay wadanka England
Mustafe Dago-dago: Laacibkii baasha bidix ee weerarka Dago-dago oo ah ciyaartoyga keliya ee u weecday dhanka siyaasada ayaa imika ku nool Magaalada Berbera, waxaana uu ka mid yahay Golaha Deegaanka ee Magaalada Berbera.
Mahadnaq: Waxaa bogga Ciyaaraha ee Geeska Afrika uu u mahad naqayaa Amiin Cabdilaahi Xaashi, Mustafe Dago-dago iyo Siciid Qarayare oo ka mid ahaa ciyaartoydaas oo naga caawiyay inay xogta dhabta ee Sawirkan na siiyaan.
By: Samatar Maxamed Cabdilaahi (Ugaas)
Tifaftiraha Ciyaaraha ee Wargeyska Geeska Afrika